Austrian Online Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(500 mavhoti, avhareji: 5.00 kubva 5)
Loading ... Kubhejera muAustria zviri pamutemo. Zvakare, kwemakore mazhinji kwave kuri kubhejera kune sosi huru yekuwana mari. Mhando dzose dzekubhejera muAustria dzinotungamirirwa neHurumende yeUnited States of Finance (Bundesministerium für Finanzen). Nhasi, kune gumi nemaviri-akavakirwa makasino. Vashanyi vanopihwa dzakasiyana siyana mitambo, inosanganisira roulette, poker, blackjack, slot michina ine inofambira mberi jackpot uye zvimwe zvekubheja varaidzo.
Nzvimbo inozivikanwa kwazvo yekubhejera muAustria ndiyo Casino, iri mukuvakwa kwehotera Grand Hotel de l'Europe. Ihotera yacho pachayo yakavakwa muna 1907, uye imba yekubhejera payakavhurwa kuruzhinji kubvira 1984 uye ine nzvimbo yemamirimita mazana matanhatu. Sezvo Austria iri nzvimbo inozivikanwa pakati pevashanyi, makasino mazhinji akavakirwa padhuze nemahotera. Ziva kuti dzimba dzemitambo munyika ino hadzishande dzakatenderedza nguva. Ivo akavhurika kune vashanyi kubva 600:18 kana 00:19.
Pamberi yeMari kuAustria
Kubhejera paInternet kune nhoroondo refu munyika ino. Dzimwe nzvimbo pamhepo kubhejera muAustria muEurope ndedzimwe dzinonyanya kubatsira, kunyange hazvo dzimbahwe ravo risingawanikwi munharaunda yenyika, seChannel Islands. Cherekedza yeAustria online kasino Bvin (Bwin), iyo iri kupihwa marezenisi munyika zhinji pasi rese.
Mitemo yekubhejera pamhepo muAustria zvakare inobvumidza iwe kuti upe marezinesi kune mamwe makambani ari munyika, chinangwa chayo - kuvhurwa kwenzvimbo nyowani dzepamhepo dzekubhejera. Nekudaro, pane imwechete mamiriro - aya mawebhusaiti anoitwa chete nevanobhejera vemuno. Panguva imwecheteyo hapana zvirambidzo panhau yemutambo kumasango epasi rese, Austria uye huwandu hwevanhu vanogona kushandisa zvakasununguka nzvimbo dzekunze masevhisi.
List kuti Top 10 yeAustria Online Casino Sites
Sites online casino inobvuma vatambi vanobva kuAustria
Ona runyorwa rwepamhepo kasino nzvimbo dzinogamuchira vatambi vanobva kuAustria, uye vachipa mhando yepamusoro uye yakachengeteka mitambo. Pano iwe unowana zvakasiyana siyana zvevaraidzo kubva kune slot michina kune kasino mitambo inorarama kubva kune vakakurumbira software vatengesi seNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nevamwe vazhinji. Iwe unogona zvakare kuverenga edu ongororo yepamhepo kasino masosi, kuti uzive akanakisa epasirositi epamhepo, mabhonasi uye sarudzo dzekubhadhara dzinowanikwa kune vatambi vanobva kuAustria.
Chando-chakafukidzwa Alps, akachena madziva uye anonaka zvihwitsi mozartkugel pamwe marzipan - zvese izvi uye zvimwe zvakawanda chiratidzo cheAustria. Kuti nyika ino CasinoToplists inoshanya newe nhasi kuitira kuti uwane makasino akanakisa uye makirabhu emitambo.
Chinyorwa chenhoroondo uye geography yeAustria;
Ositiriya - makasino uye kubhejera munyika ino:
Kasi-based casinos inobvumirwa, ndeye 12, kunewo ngarava nekasinasi pabhodhi;
Pamberi peInternet casinos kune dzimwe nyika vanovhara ikozvino ban lifted;
Kune ma-casino operators ari munharaunda.
Nzvimbo dzinonyanya kuzivikanwa pasi-based casinos muAustria;
Nzvimbo yeAustria uye nhoroondo pfupi yemamiriro ezvinhu
Hurumende yeFederal uye panguva imwe chete iyo paramende repamutemo izita repamutemo reRepublic reAustria. Kutanga kutaurwa kwaro kunobva mugore 996 AD Austria iri pakati peEurope. Nhoroondo yenyika iyi yakabatana zvakanyanya neGerman federal state yeBavaria - chete muna 1156, iyo republic yakazvimiririra. Pane imwe nguva munyika iyi yakatorwa neCzech Republic, Croatia neHungary, mukuwedzera kuoma kwazvo kuva nehukama neTurkey, France uyezve neGerman. Guta guru renyika ndiro guta reVienna. Mushure mekupera kwehondo yenyika yechipiri Austria seGerman yakakamurwa kuita matunhu mana.
Casinos uye Kubhejera muVienna
Rezinesi rekutanga rekuvaka kasino rakapihwa muna 1922, uye yekutanga kubhejera kuisheni kwakaburitswa muSalzburg. Kubva ipapo, mvura zhinji yakaerera, asi chinhu chimwe chinoramba chakangofanana - kasino muAustria inobvumidzwa. Isangano rakakura kwazvo re "Casinos Austria", rinoshanda gumi nemaviri dzokubhejera uye rinosanganisira mamwe masangano zvinoenderana nemabatiro ekubata.
Saka kambani "Casinos Austria International" inozivikanwa kure nekure kwemiganhu yenyika yavo: ine matavi mumatunhu gumi nemashanu uye parizvino iri pasi payo 15 mamakasino. Uye zvakare, kambani yakagadzira chikamu chinobhadhara chebhizimusi rekubhejera: ngarava dzine makasino mubhodhi. Huwandu hwavo hwave kusvika nekukurumidza pamaki zana.
Iyi mafungiro ehurumende kune kubhejera inounza mari yakawanda kumabhiriyoni euro.
Makhanyi anozivikanwa zvikuru muAustria
Bad Gastein - dunhu rekumaodzanyemba kweSalzburg
Muguta rino mune imwe yemakasino akasarudzika kwete muAustria chete, asiwo muEurope yese. Iyo iri mukuvakwa kweGrand Hotel de l'Europe, yakavakwa mukutanga kwezana ramakore XX. Kazhinji shanda kasino pauzere hunyanzvi kutanga kubva na19: 00, uye vese vanoshuva kushanyira zvakafanira kuti vateerere kune mupfekero - masutu emitambo uye zvikabudura hazvigamuchirwe pano. Naiye unofanirwa kuve nechero chitupa. Chinhu chikuru - kuvapo kwemifananidzo yako, uye zera rakakura kupfuura makore gumi nemasere. Tikiti yekupinda inodhura makumi maviri nemaviri euros, unovawanira iwo ma tokeni akaumbwa muEuro 18.
Muguta rino, kasino «Casino Salzburg» iri mumuzinda uno weSchloss Klessheim, yakavakirwa mune rococo maitiro ekufunga-pfungwa, izvo pachazvo zvinokwezva. Ino nzvimbo haisi kungo tarisa nzvimbo yekupfura. Kupinda kwekasino kwakabhadharwa, kukosha kwayo kunoenderana nenguva nezviitiko zvinoitika mumuzinda. Inogona kuve mitambo yemitambo yemitambo kana vaimbi.
Guta rekushanyira reVelden rakakurumbirawo nekuda kwemakasinasi, akavakwa kare muna 1950. Asi sezvo avo vari kuda kubata muswe weFortune gore rega rega vanova nekuwedzera, chivakwa checasino chakawedzerwa. Chivako chitsva, chakavhurwa muna 1989, chinokwanisa kutora vashanyi zviuru zvina uye hachina kunyanya kunaka. Kune nzvimbo yekudyira, bistro, bhawa, uye yekunze yekutamba ploschadka- terrace pamusoro penzvimbo yakanaka. Ndiyo imwe yemakasino anozivikanwa uye emazuva ano muEurope.
Vienna Opera. Nzvimbo: Vienna, Opernring, 2. Austria inodada nehunyanzvi hwemimhanzi - Mozart, saka kushanya ku "Vienna Opera" kunosungirwa kuverengerwa mune runyorwa rwezvisungo zvekuona zvinotaridzika;
Hundertwasser Imba. Nzvimbo: Vienna, Untere Weissgerberstrasse, 13. Kero ino uchawana chimwe chezvivakwa zvakawandisa muAustria.
Sigmund Freud Museum. Nzvimbo: Vienna, Berggasse, 19. Iva nechokwadi chekushanyira miziyamu yemusayendisiti ane mukurumbira. Ikoko iwe unozoudzwa kwete chete zvehupenyu asiwo zvechirwere chepfungwa. Kuvakwa kweiyo great psychoanalyst kwakagara kweanoda kusvika makore makumi mana nemanomwe.
Vienna Woods. Nzvimbo: Vienna, Wienerwald. Wakaneta nemigwagwa yakabatikana yeVienna, unogona kugara uchizorora mubindu reguta rakanaka.
Museum "Nhoroondo yeArt". Kero: Burgring 5. Pano maziso ako achaonekwa epakutanga mifananidzo yevatenzi vakadai saTitian, Raphael, Vermeer nevamwe vanyori, pamwe nezvivezwa uye zvakasiyana siyana zvigadzirwa.
Chokwadi chinofadza pamusoro peAustria neAustria
Vagari vane 8, 4 mamiriyoni, 90% vanotaura chiGerman;
Nekuda kwekufanana kwemazita, anowanzovhiringidza Austria neAustralia. Naizvozvo, inozivikanwa souvenirs "Austria: hapana kangaroo";
Ndiyo nyika bedzi umo sarudzo dzakabvumira vagari kumakore 19, pane 18;
Lake Gruner inovanza paki chaiyo - munguva yechando inongova 1-2 metres yakadzika, asi mushure memafashama ekunyunguduka kwemvura kudzika inova gumi nemaviri metres;
MuAustria, sekuGermany, mumusasa, varume nevakadzi vanogeza mune imwe nzvimbo;
Inopfuura hafu yevarume veAustria vane uremu;
Iyi nyika musha kwete Mozart chete asiwo naHaydn, Schubert, Liszt, Strauss, Mahler, Bruckner.
Austria pamepu yeEurope
0.1 Pamberi yeMari kuAustria
0.2 List kuti Top 10 yeAustria Online Casino Sites
2.1 Sites online casino inobvuma vatambi vanobva kuAustria
3 Kubhejera muAustria
3.0.1 Nzvimbo yeAustria uye nhoroondo pfupi yemamiriro ezvinhu
3.1 Casinos uye Kubhejera muVienna
3.1.1 Makhanyi anozivikanwa zvikuru muAustria
3.1.1.1 Bad Gastein - dunhu rekumaodzanyemba kweSalzburg
3.1.4 Chokwadi chinofadza pamusoro peAustria neAustria
3.1.5 Austria pamepu yeEurope